Ugcino lwenkqubo yokusebenza yeWindows kunye noMlawuli weeMpawu eziPhambili
ikhaya/imiyalelo/Ugcino lwenkqubo yokusebenza yeWindows kunye noMlawuli weeMpawu eziPhambili
Vangelis29. Septemba 2015
Ngokuqinisekileyo uyayazi imeko xa uphinda ufaka iWindows. Kuya kufuneka uvule iWindows emva kweentsuku ezingama-30 kwangoko. Ukuvula kwakhona kuyimfuneko ukuba utshintshe i-hardware. Kukho isixhobo esincinci apho ukugqiba ukwenziwa kusebenze ikhusela. Oko kuthetha ukuba, yenza ugcino olupheleleyo lokuvula iWindows yakho. Ufakelo olutsha kufuneka ubuyisele i-backup kwaye iWindows iyasebenza. Oku kukusindisa ekubeni uvule i-intanethi okanye ngomnxeba. Isebenza njani inkqubo encinci nesimahla iboniswa apha:
Phinda ufake iiWindows kwaye ungasasebenzi
Khuphela Umphathi weeTokheni eziPhambili
Yikhuphe kwi-a ifolda (Ugcino lugcinwe kolu lawulo, kukhethwa indlela yangaphandle)
Akukho fakelo olufunekayo, cofa kabini kuMlawuli weeMpawu eziPhambili.exe
Nje ukuba oko kuqale, cofa apha Ukwenza isebenze yogcino
Ugcino kugcinwa kwifolda.
Umphathi weeTokheni eziPhambili
Qaphela: Nceda uqinisekise ukuba i-fuse ayikho kwi ihadi diski C: buxoki. Izakucinywa xa idiski enzima ibuyiselwa kwakhona kwaye ifomathiwe. Sincoma ukwahlula okwahlukileyo okanye intonga ye-USB.
Ukuba ufuna ukubuyisela indawo yogcino, qalisa inkqubo yoMphathi weeMpawu eziPhucukileyo kwaye ucofe kuyo Ukwenza kusebenze ukubuyisela (Kubalulekile: inkqubo kunye ne-backup kufuneka zikwifolda enye).
Unokwenza isipele kwaye uzibuyise rhoqo njengoko uthanda ukuba awuzange wenze naluphi na utshintsho kwizixhobo zekhompyutha.
Yongeza inkqubo yolawulo yeWindows 7 kwimenyu yokuqala
Amaxwebhu asandula kusetyenziswa
Guqula ifayile ye-Outlook OST ibe yifayile ye-PST kunye ne-OST engaxhunyiwe kwi-Intanethi ukuya kwisiguquli se-PST
Yahlula intonga ye-USB kwiindawo ezininzi nge Windows 10 - Nantsi indlela
Ukucwangciswa komfanekiso ophambili kwiWindows 7
Hlaziya ukubhaliswa kweOfisi 365- Nantsi indlela
Ukulungiselela umphezulu wakho omdala weMicrosoft kwintengiso-iingcebiso
Uphendlo lwe-Intanethi cola iWindows 7 Ekhaya
IFirefox -khubaza oopopayi bethebhu
phambili ukwenziwa kusebenze ukubuyisela umva Windows